Know Your Software: SAP Business One on HANA Vs MSSQL - Vanguard
HANA Vs SQL 1200x628 copy
Home » Know Your Software: SAP Business One on HANA Vs MSSQL
အကယ်၍ သင်ဟာ SAP Business One ERP Software ကို အသုံးပြုဖို့ စိတ်ကူးနေတယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် SAP Business One ERP Software ရဲ့ Microsoft SQL Version ကို သုံးနှင့်ပြီးသား ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် HANA နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းအချက်တွေကို တော်တော်လေး ကြားဖူးထားလောက်မှာပါ။
ဆိုတော့ကား၊ SAP HANA ဆိုတာ ဘာလဲ။
SAP HANA နဲ့ Microsoft SQL ဆိုတာ SAP နဲ့ Microsoft တို့က အသီးသီး Develop လုပ်ထားတဲ့ RDBMS (Relational database management systems) တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Database Server တစ်ခုအနေနဲ့ သူတို့ ရဲ့ အဓိကကျတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ အခြား Software (e.g. SAP Business One) တွေက တောင်းဆိုလာတဲ့ အချက်အလက်တွေကို သိမ်းဆည်း သိုမှီးပေးခြင်းနဲ့ ပြန်လည် ရယူပေးခြင်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ဒီနည်းပညာနှစ်ခုမှာ ထူးခြားတဲ့ကွာခြားချက်တွေကတော့ ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒီကွာခြားချက်တွေကို အရိုးရှင်းဆုံး နှိုင်းယှဉ်ပြရမယ်ဆိုရင် –
SAP Business One ဟာ ကားတစ်စီးလို့ဆိုကြပါစို့၊ ကားကို ဘယ်လို အင်ဂျင်နဲ့ စွမ်းရည်မြှင့်ချင်လဲ SAP HANA လား ၊ Microsoft SQL လား ဆိုတာ ကို သင် ရွေးချယ်ရမှာပါ ။
Microsoft SQL ကတော့ Mazada Built-in Engine လိုပဲ Popular ဖြစ်တယ်၊ လူသုံးများတယ်၊ လိုရာခရီး ကို လုံခြုံ စိတ်ချမှုရှိရှိ ပို့ပေးနိုင်တယ်။
SAP HANA ကတော့ လုံးဝကွဲပြားသွားပါတယ်။ ရုတ်တရက် ဆိုသလို သင့်ကားထဲက Maserati engine ရဲ့ စွမ်းအင် အပြည့်နဲ့ ဟိန်းလိုက်တဲ့အသံကို ကြားလိုက်ရသလိုပါ။ အဲဒီ့ အခိုက်အတန့်လေးမှာပဲ သင်သွားရမယ့် ခရီးဟာ အရင်ကနဲ့ လုံးဝမတူတော့ဘူးဆိုတာကို သင်ခံစားမိပါလိမ့်မယ်။
အချုပ်အားဖြင့် ပြောရရင်တော့၊ SAP HANA ဟာ Microsoft SQL နဲ့ နယ်ပယ် အတော်များများမှာ ကွာခြားမှု တွေ ရှိနေပြီး အဲ့ဒါတွေကတော့ –
SAP HANA ဟာ နောက်ဆုံးပေါ် in-memory, column-oriented relational database manage system တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အလွယ်နားလည်အောင် ပြောရရင်တော့၊ သင့်ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို RAM memory ပေါ်မှာ တိုက်ရိုက် သိမ်းဆည်းတာလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ systems အနေနဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဖတ်ယူရာမှာ Microsoft SQL ရဲ့ အချက်အလက်ဖတ်တဲ့ ပုံစံလိုမျိုး Hard Disk ထဲက အချက်အလက်တွေကို RAM ပေါ် ဆွဲတင်စရာ မလိုတော့ဘူးလို့ ဆိုလိုတာပါ ။
ရလဒ် အနေနဲ့ကတော့ အရမ်းမြန်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့ အချက်အလက် ဖတ်ယူနိုင်စွမ်းဟာ သင့်မှာ ဘယ်လောက်များတဲ့ အချက်အလက်တွေ ထုနဲ့ထည်နဲ့ ရှိနေပါစေ၊ ကျေးဇူးတင်စရာ ကောင်းလောက်အောင် ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် Access လုပ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
SAP HANA ဟာ Advanced Analytics နဲ့ ELT (Extract, Load, Transform) လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေကိုလဲ ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး Application Server တစ်ခုလိုပါ စွမ်းဆောင်နိုင်မှာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရ ရင်တော့ SAP HANA ဟာ Analytics အတွက် သီးခြား Database မလိုဘူးလို့ ပြောချင်တာပါ ။ အချက် အလက်မှန်သမျှ ဟာ RAM နဲ့ Business Intelligence Software မှာ သိမ်းဆည်းထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်အနေနဲ့ များစွာသော System Users တွေရဲ့ မတူညီတဲ့ Database တွေကတစ်ဆင့် ဆွဲယူ အသုံးပြုချင်တဲ့ မြောက်များစွာသော Report တွေကို ချက်ခြင်းဆိုသလို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ရယူပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရေးအကြီးဆုံး အချက်ကတော့ HANA နည်းပညာဟာ real-time analytics ကို ပေးစွမ်းနိုင်တာ
ပါ။ အကယ်၍ Microsoft Power BI လိုမျိုး Business Intelligence Tools တော်တော်များများ ဟာ Microsoft SQL Database နည်းပညာကို အသုံးပြုထားတယ်ဆိုရင်တော့ real-time analytics ကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အချိန်တစ်ခု ပေးပြီးမှသာလျှင် Report တွေကို ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ သင်ရဲ့ Business Intelligence Tools ကို Microsoft SQL နည်းပညာနဲ့ အသုံးပြုထားပြီး သင့်အနေနဲ့ သင့်ရဲ့ ERP Software ကိုလည်း real-time analytics လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သီးသန့် Data Warehouse တစ်ခု သို့မဟုတ် third-party vendor တစ်ခုခုနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး လိုအပ်တဲ့ တပ်ဆင်မှုတွေကို ထပ်မံဆောင်ရွက် ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
SAP HANA ရော Microsoft SQL ပါ SAP Business One ERP Software ကနေ သင်မျှော်လင့်ထားတဲ့ အဓိက ကျတဲ့ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အထောက်အပံ့ ပေးနေဦးမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် လည်း SAP HANA နည်းပညာ ကို အသုံးပြုထားသူတွေ အတွက်ကတော့ Microsoft SQL မှာ မပါတဲ့ မတူထူးခြားမှုတွေကို အကျိုးခံစားခွင့်ရှိနေမှာပါ။ အဲ့ဒါတွေကတော့ –
စတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
SAP HANA အနေနဲ့ ပိုပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့ Server ပိုင်း လိုအပ်ချက်က သာမာန်ထက်တော့ မြင့်နေတာ အမှန်ပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ SAP HANA ဟာ Microsoft SQL ထက် ပိုမို သာလွန်ကောင်းမွန်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝတဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ အဲဒီ့အတွက်လဲ SAP HANA အတွက် လိုအပ်တဲ့ Server နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ သတ်မှတ်ချက်ကလဲ မြင့်မားသွားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
HANA ကို အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် သင့်အနေနဲ့ အနည်းဆုံး 64GB RAM လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့ အားလုံးသော ERP Transactions တွေ ဟာ RAM ပေါ်မှာ တစ်စုတစ်စည်းတည်း ရှိနေဖို့အတွက် ခုလိုမျိုး လိုအပ်တာ ဖြစ်ပါ တယ်။ တစ်ကယ်တမ်းတော့ သင်ဟာစွမ်းအားမြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအတွက် ပေးတာမျိုးဖြစ်ပြီး Microsoft SQL ထက် ပိုပြီး ရင်နှီးမြှုတ်နှံဖို့ လိုအပ်တဲ့ SAP HANA ရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ကို လဲ မျှော်လင့်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အချုပ်အားဖြင့် ပြောရရင်တော့ Solutions ၂ ခုလုံးဟာ သူ့ဟာနဲ့ သူ တော့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အားသာချက် တွေနဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရှိနေပါတယ် ။ အချက်အလက် တွေနဲ့အရောင်းအဝယ် စာရင်းတွေကို မြန်မြန် ဆန်ဆန်နဲ့ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ကိုင်ချင်တာမျိုး၊ အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ အချက်အလက်တွေကို သိမြင်နိုင် ချင်တာမျိုး နဲ့ SAP Business One ရဲ့ Bonus Features တွေကို အသုံးပြုချင်တာမျိုး စတာတွေကို လို အပ်နေတဲ့ အသေးစားနဲ့အလတ်စား လုပ်ငန်းစုတွေအတွက်ကတော့ SAP HANA ဟာ သေချာပေါက် ထည့် သွင်းစဉ်းစားသင့်တဲ့ ရွေးချယ်စရာတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ရေရှည်အနေနဲ့လဲ HANA မှာ အထိုင်ချထားတဲ့ SAP Business One ဟာ သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ ROI (Retrun Of Investment) နဲ့ တန်ဖိုးကို တိုးတက်လာဖို့ကိုလဲ ပိုပြီး စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ အကြောင်းအချက်တွေဟာ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် အရမ်းကြီး အရေး မပါဘူးဆိုရင်တော့ SQL မှာ အထိုင်ချထားတဲ့ SAP Business One ကို အသုံးပြုတာက စရိတ်နည်းနည်းနဲ့ပိုပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ Microsoft SQL ဟာလည်း စျေးကွက်ထဲမှာ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ရပ် တည်နေတာဖြစ်ပြီး၊ သင့်အနေနဲ့ သူ့ကို Support နဲ့ Maintain လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Vendor ကိုပဲ ရှာဖို့ လိုအပ် ပါလိမ့်မယ် ။
တစ်ကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ SAP Business One ကို SAP HANA သို့မဟုတ် Microsot SQL ဘယ်ပေါ်မှာ ရွေးချယ် ရင်းနှီးမြှုတ်နှံသင့်လဲဆိုတာ ပိုပြီး အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Just drop an inquiry here ….
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Consultant တစ်ယောက်ကနေ အချိန်တိုအတွင်း ပြန်လည်ဖြေကြားပေးသွားမှာပါ။